ဒီနေ့ နောက်ဆုံးနော် ~ The ICT.com.mm Blog
အမြန်ယူထားသင့်တဲ့9Jan 2022 ရက်နေ့ထိပဲရမယ့် Promo Code အစီအစဉ်လေး ရှိတယ်နော် ..
Promo Code ဘယ်ကရမယ်ဆိုတာ
၁. အိုင်စီတီရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ဖြစ်တဲ့ www.ict.com.mm ကိုသွားပါ။
၂. ညာဘက်အောက်ခြေထောင့်မှာရှိတဲ့ Chat with us ကို နှိပ်ပါ။
၃. “Hi, we haveapromo code for all our customers to celebrate the new year! Would you like to get one now?”
ဒီစာလေးပေါ်လာရင် Yes, sure! ကို ရွေးချယ်ပေးပါ။
၄. လူကြီးမင်းရဲ့ အီးမေးလ်လိပ်စာလေးကို ထည့်သွင်းလိုက်ပါ။ (Points တွေရယူဖို့ဖွင့်ထားတဲ့ ICT Account မှာအသုံးပြုထားတဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာနဲ့ အတူတူပဲဖြစ်ရပါမယ်နော်)
၅. အီးမေးလ်လိပ်စာလေးထည့်ပြီးတာနဲ့ စာလုံး (၁၂) လုံးပါတဲ့ Promo Code လေးကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ ပေးပို့မှုမရခဲ့လျှင် Customer care team ကို ဆက်သွယ်ပြီးPromo Code လေးကိုရရှိနိုင်ပါတယ်နော်။
အဲ့ဒီ့ Promo Code လေးကို Copy လုပ်ပြီး Save လုပ်ထားလိုက်ပါ။
၆. အိုင်စီတီမှာ လိုချင်တာတွေဝယ်ပြီးပြီဆိုရင် Check Out Page လေးကို ရောက်တဲ့အခါ လူကြီးမင်းရဲ့ 2022 ICT.com.mm Discount ရယူဖို့ ခုနက သိမ်းဆည်းထားတဲ့ စာလုံး(၁၂)လုံးပါ Promo Code လေးကို ထည့်သွင်းပေးလိုက်ရုံပါပဲ။
ကဲ အခုပဲ ICT.com.mm မှာ Promo Codeလေးနဲ့ ဈေး၀ယ်ထွက်လိုက်တော့နော်။
#ShopICT #Myanmar #ICT #Promotion #promocodes #1onlinetechretailer
Newer အိမ်မှာ၊ ရုံးမှာ ဝိုင်ဖိုင်မမိတဲ့နေရာတွေရှိရင် စိတ်ရှုပ်မခံနဲ့နော်
Older Promotion စောင့်နေတဲ့ Gamer တွေအတွက်